The Gardener: 2011-07-24
ဥပဒေတော့ရှိတယ် တရားဥပဒေ မရှိတာ လို့ xanthos ကပြောတယ်။ သူက ဘယ်နိုင်ငံမှာ နေသလဲဆိုတော့ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားက ခြေတပေါင်ကျိုးမကြီး ရင်ကော့ရပ်နေတဲ့ နိုင်ငံမှာလို့သိရတယ်။ (မြန်မာနိုင်ငံတော့ဟုတ်ဟန်မတူဘူး။)
သူငယ်ချင်းတွေ အွန်လိုင်းမှာတွေ့ရင် စကားစမြည်ပြောတယ်။ minute discussion တွေ၊ cute debate တွေ၊ anti-nonsense campaign တွေလုပ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ဘရိမ်းစထောမ်း လုပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ပြောတာကို နည်းနည်း ပါးပါး နာယူတယ်။ အဲဒီ့အတွက် Group chat ပေးထားတဲ့ Gtalk ကြီးကိုပစ်ပျက်ကြည်ညိုသွားတာ ကြာပါပြီ။
စင်ကာပူနိုင်ငံက မူးယစ်ဆေး သယ်ဆောင်တဲ့ မလေးလူငယ်လေး အမှုကို ဘယ်လို သဘောထားပြီး ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာကနေ ဆက်ပြီး အဲဒီ Justice တွေ၊ Laws တွေဘက် ရောက်သွားတယ်။ ရန်ကုန်ဘဆွေထုံး နှလုံးမူပြီး မသိတဲ့လူတွေနဲ့ အငြင်းအခုံ မလုပ်ခဲ့ရာကနေ အခုဆို သိတဲ့လူတွေနဲ့တောင် အငြင်းအခုန် မလုပ်တော့ဘဲ ထိုင်နားထောင် နေလိုက်တယ်။ အဲဒီလိုနားထောင်ပြီး သကာလမှာ ပို့စ်တစ်ခုရေးလိုက်ပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။
ဒီလူကြီးကို အိုင်းစတိုင်း လို့လည်း ခေါ်တယ်။ အိန်းစတိန်း လို့လည်း ခေါ်တယ်။ (သူ့အမေကဆို ဟဲ့ကောင်လေးလို့ပါခေါ်သေးတယ်။) သူပြောတာကို စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့ ညီနောင်တို့။ ဖြစ်သလို တော်ရိလျော်ရိ ဘာသာပြန်ရင်တော့ အတည်မပြုနိုင်တဲ့ ဥပဒေကို ဖြတ်ကျော်ခွင့်ပြုနေတာထက်ပိုပြီး နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဥပဒေနဲ့ အစိုးရရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကို ဖျက်ဆီးညှိုးမှိန်စေတာမရှိဘူး တဲ့.။ အဲဒါဟာ ပေါ့သေးသေးကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ မုန့်လေပွေလို ပေါ့ကြီးကြီး ကိစ္စလည်း မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံတော်မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာကို ဥပဒေရဲ့ tunnel အဖြစ် သုံးတာတွေဟာ ဥပဒေရဲ့ တန်ဖိုးကို စိုးရိမ်ရေမှတ်ကို ထိုးဆင်းစေတယ်။ ဥပဒေဆိုတာက တိုင်းသူပြည်သားတွေ အေးအေးချမ်းချမ်း နေနိုင်ဖို့၊ တရားမျှတအောင် ဖြည့်စွက်ထားတဲ့ စည်းဘောင်တွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါတွေကို ဘယ်သူမဆို လိုက်နာရမယ်။ တစ်ယောက်ယောက်က မလိုက်နာဘဲ နေခွင့်ရှိရင် အဲဒါဟာ တရားဥပဒေ မဟုတ်တော့ဘူး။ မျှတမှု မရှိတော့ဘူး။ မျှတမှုမရှိတဲ့ ဥပဒေကို လိုက်နာဖို့ လို/မလို ဆိုတာကတော့ another story ဖြစ်သွားပြီ။ ဒီအခန်းတွေ ဒီမှာမပါဘူး။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ အာဏာခွဲဝေသုံးစွဲပုံပါ။ အာဏာကိုသုံးပြီး rules ကို overwrite မလုပ်ရပါဘူး။ အဲဒီလိုလုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ Ice age3ထဲက Buck လိုဖြစ်နေပါမယ်။ Buck ဆိုတာကတော့ ဒိုင်နိုဆောတွေနဲ့ နေတဲ့ တစ်ဖက်လပ်ပါပဲ။ မသိရင်လည်း Ice Age ပြန်ကြည့်ပါ။ သူက ဘာပြောလဲဆိုတော့
Rule no. 1: Always listen to Buck!
Rule no.2: stay in the middle of the trail
ဆိုပြီး ရှေ့တစ်နေရာမှာ ပြောပါတယ်။ နောက်တစ်နေရာမှာကြတော့ သူ့ရဲ့ rule no.2က အဆင်မပြေတော့ပါဘူး အဲဒီတော့ သူက ဒီလိုပြောပါတယ်။
Rule number5says you can ignore rule number 2.
Laws တွေဟာ တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ Rules တွေပါပဲ။ Rulers ဟာ Rules ကို စိတ်ထဲပေါ်သလို လုပ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ လုပ်ရင် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ အဲဒီနိုင်ငံဟာ Ice Age မှာနေရစ်ရပါလိမ့်မယ်။
မမျှတတဲ့ ဥပဒေဟာ အကြမ်းဖက်မှုတစ်မျိုးပါပဲ။ မမျှတတဲ့ ဥပဒေကို မလိုက်နာလို့ ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာက ပိုတောင်ဆိုးသေး။
မျက်မှန်အ၀ိုင်းနဲ့ ခပ်ပြုံးပြုံး အိန္ဒိယ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ စကားပါ။ နည်းနည်းလောက်တော့ စဉ်းစားကြည့်ဖို့ ကောင်းတယ်။ စဉ်းစားရတာဟာ ပိုက်ဆံမပေးရသလောက် လူသုံးအနည်းဆုံး အားကစားနည်းတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်တယ်။
စကားပြောရင် ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်ပြောတဲ့ တုန်ခါနေသော စပီးယား တစ်ယောက်ကို ခင်ဗျားတို့လည်းသိမှာပါ။ သူရေးတာကို သူ့ဘာသူတောင် ဘာဆိုလိုခဲ့မှန်း မသိမှာစိုးလို့ ရှိတ်စပီးယားစာတွေ အတွက် ဒစ်ရှင်းနရီတွေ၊ဘာတွေ သီးသန့်ပြန်ထုတ်ရတယ်။ အဲဒီလူကြီးကရော ဘာတွေပြောခဲ့လဲကြည့်ကြရအောင်။
(သောက်ချိုးမပြေတဲ့) ဥပဒေမဲ့ ငနဲသားတွေဆိုတာ သူတို့ရဲ့ ဆန္ဒကို ဥပဒေအဖြစ် သတ်မှတ်တဲ့သူတွေပဲ တဲ့။
ရှေ့က ကွင်းခတ်ထားတာကတော့ သူ့စိတ်ထဲမှာ ထည့်ပြောချင်တဲ့ စာသားပါ။ ဒါတွေကို သူ့ဒစ်ရှင်းနရီ အနည်းငယ်လောက် ဖတ်ဖူးမှသိတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံမှာနေနေ လူဟာ တရားမျှတမှုကို မြတ်နိုးတဲ့ သဘောရှိတယ်။ တရားမျှတမှုကို မုန်းတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေကတော့ တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ မိစ္ဆာ အာဇီဝ (၀ါ) သမ္မာအာဇီဝနဲ့ ဆန့်ကျင်တာတွေနဲ့ အသက်မွေးရသူတွေပဲ ဖြစ်မယ်။
မြန်မာပြည်နဲ့ တော်တော်ကြီးဝေးတဲ့ နိုင်ငံက မာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာရဲ့ စကားနဲ့ပဲနိဂုံးချုပ်ချင်ပါတယ်။ (သိပ်များများရေးရင်လည်း နေရင်းထိုင်ရင်း အကုသိုလ်ဖြစ်အောင် လုပ်သလိုဖြစ်မယ်ဆိုပြီး အတိုချုံးလိုက်တာလည်း ပါတယ်။)
(အဟောအပြောပညာလေ့လာနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားလောင်းတွေ ကျက်ထားသင့်တယ်။ အတီးအထစ်တော့ မပြောနဲ့ပေါ့။ တစ်ကြောင်းတည်းကို ထမင်းမစားခင် သုံးခါလောက်ရွတ်ရင် ပြေပြေပြစ်ပြစ်ပြောထွက်လာမှာပါ။ အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ ကျက်ထားပေါ့။)
မမျှတတဲ့ ဥပဒေကို သူ့အတွင်းစိတ်က ဒါဟာမမျှတဘူးလို့ ပြောနေသလို ခံစားရတဲ့အတွက် အဲဒီ့ ဥပေဒကို ချိုးဖောက်တဲ့သူ၊ ဒီလူဟာ အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ အတွင်းစိတ်ထဲမှာ မမျှတမှုကို သိအောင် လှုံ့ဆော်တဲ့အတွက် ပြစ်ဒဏ်ကျခံရမှာကို ထက်ထက်သန်သန် လက်ခံလိုသူ၊ အဲဒီလူကမှ တရား ဥပဒေကို အလေးစားဆုံး ထုတ်ဖော်ပြတဲ့သူ အစစ်ဖြစ်တယ်။
တရားမျှတမှုကို တကယ် လိုလားတဲ့သူဟာ တရားမျှတမှုကို ကိုယ်တိုင်လည်း ကျင့်သုံးရလိမ့်မယ်။ အဲဒီတစ်ချက်ကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ ဆက်တွေးနေမိတယ် …။ ။
This post is for my younger bros and sis(es) who value the freedom. I also need to digest on this freedom issue for some years. In our life, there is no right or wrong line drawn clearly as the boundary lines in games. If we really own our life , we can redraw the lines and we can create our own game instead of playing the same old games of life with old and decayed rules and so narrow boundary lines.
You may hate it or like it, but it is still true : "Majority Rule". I wish all the youth, the future majority, will be smarter than us and rule the game of theirs, game of their country and game of their life and game of their hope.
Labels: article, freedom, justice, laws, rules and rulers
မနေ့က ကြည့်တဲ့ Monk Episode မှာ Monk တစ်ယောက် တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် မရခဲ့ဘူးတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရတယ်။ သူက သိပ်ကိုပျော်နေတယ်။ သူ့ကိုယ်ကြည့်ရင်း သနားလာတယ်။ သူငယ်ချင်းမရှိတဲ့လူငယ်လေးဘ၀ကို သူဖြတ်သန်းခဲ့ရလိမ့်မယ်။ တကယ့်ကို မိတ်ဆွေမရှိတဲ့ဘ၀ပေါ့။ ဘယ်လောက်များခြောက်သွေ့လိုက်မလဲ။ Monk ကနေ ဆန့်ထွက်လိုက်တယ်။ သူငယ်ချင်းမရှိခဲ့ကြတဲ့သူတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းမရှိတော့တဲ့သူတွေ။ ဘ၀ဟာ ကန့်သတ်ခံလိုက်ရသလို ကျယ်ပြန့်မှုမရှိတော့ဘူး။
သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်း တော်တော်လေး ရှည်လျားထွေပြားတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဖို့ခက်တယ်။ Monk မှာသူငယ်ချင်းမရှိဘူး။ အဲဒါဟာ အခုရာစုရဲ့ပြဿနာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ အသက်ကြီးလာလေ၊ ဘယ်သူမှ ကြည့်မရလေဖြစ်လေပဲ။ အဆင်မပြေဘူး။ အပေါက်အလမ်းမတည့်ဘူး။ နားလည်မှုမရှိဘူး ဆိုပြီးထင်လာကြတယ်။ ငယ်တုန်းက ပေါင်းခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ဆက်ပေါင်းလို့မရတော့ဘူး။ တန်ဖိုးတွေမတူတော့ဘူး။ ကြီးလာမှတွေ့တဲ့သူတွေနဲ့လည်း ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းလို့မရဘူး။ သူ့အကြောင်း၊ ကိုယ့်အကြောင်း သိပ်မသိကြလို့။ သူငယ်ချင်းဆိုတာထက် မိတ်ဆွေတွေပဲများလာမယ်။ သူငယ်ချင်းဆိုတာတော့ မရှိသလောက်ပဲ။ စိတ်ထဲမှာ ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာမျိုး ထုတ်ပြောရလောက်အောင် ယုံရတဲ့သူမျိုးမှ သူငယ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ လက်ဖက်ရည်သောက်ဖို့၊ ဘောလုံးပွဲကြည့်ဖို့လောက် သူငယ်ချင်းတွေတော့ ပေါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေကလည်း သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ အနှစ်သာရကို ပြည့်ဝစေနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ သူငယ်ချင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာ သူ့အဆိုးအကောင်းတွေကို ကိုယ်ကလည်း သိ၊ ကိုယ့်အဆိုးအကောင်းတွေကို သူကလည်းသိပြီး နားလည်မှုမြင့်မားတဲ့ relationship ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ အဲဒါဟာမလွယ်ဘူး။ တကယ့်ကိုမလွယ်ဘူး။ သူငယ်ချင်း အစစ်တစ်ယောက်ရဖို့ဆိုတာ ဘုရားပွင့်ဖို့ခက်သလိုကို ခက်တယ်။ သူငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေကို ရောထွေးမပြောဘဲ မြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ချမ်းသာရတဲ့သူငယ်ချင်းမျိုးရှိရင် သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။
Monk က သူ့သူငယ်ချင်းအတွက် သူမကြိုက်တာတွေ သည်းခံပြီး လျှောက်လုပ်ပေးတယ်။ အဲဒါက နည်းလမ်းမမှန်ဘူး။ သိပ်မခင်ခင်လောက်ပဲညာလို့ရမယ်။ တကယ်ခင်ပြီး အစင်းသိတွေဖြစ်လာရင် ညာနေရတာသိပ်ပင်ပန်းတယ်။ လူဆိုတာ အကောင်းအဆိုးရောထွေးနေတယ်။ သူ့မှာလည်း ဆိုးတာရှိမယ်၊ ကိုယ့်မှာလည်းရှိမယ်။ ဆိုးတာမဟုတ်ရင်တောင် ကိုယ်မကြိုက်တာရှိမယ်။ တစ်ချို့လည်း စိတ်ထားကောင်းသလောက် အပြောဆိုးတယ်။ တမင်များပြောသလားထင်ရတယ်။ တချို့တွေလည်း လေနဲ့သိပ်ကောင်းကြတယ်။ တကယ်လိုရင်တော့ ဘယ်တော့မှ ပေါ်မလာဘူး။
Monk ခမျာ ကံဆိုးတော့ သူ့သူငယ်ချင်း Hal က လူသတ်သမားဖြစ်နေတယ်။ သူ့ကို အကြံအစည်နဲ့ လာပေါင်းနေတဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်နေတယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာမို့လို့မသိသာပေမယ့် ကိုယ့်ဆီက တစ်ခုခုလိုလို့ လာပေါင်းနေတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးကြုံဖူးမှာပဲ။ တစ်ချို့တွေကို ကိုယ်က သိပ်ခင်မိခဲ့တာမျိုးလည်းရှိမယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ခင်မင်မှု၊ ချစ်ခင်မှုဟာ မသန့်စင်ဘူး။ ၀က်တွေကို အသားတိုးအောင် အစားများများကျွေးထားသလိုမျိုး၊ တစ်ချိန်ကြရင် အကျိုးအမြတ်တစ်ခုအတွက် အနစ်နာခံပြီး ခင်နေသလိုမျိုးပေါ့။ မျှော်လင့်ချက်ကြီးတွေနဲ့ ခင်နေကြတယ်။ မျှော်လင့်တာ မဖြစ်လာရင် မခင်တော့ဘူး။ အဲဒီလိုမျိုး စိတ်တွေနဲ့ ပေသီးခေါက်ပြီး ခင်ကြတာမျိုး။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ့်ဆီမှာ မရှိတဲ့အရည်အချင်းတစ်ခု သူ့ဆီမှာရှိရင် ကပ်ပြီး သုံးရအောင်ခင်တာမျိုး။ ၀က်သတ်သမားနှင့်တူသော သူငယ်ချင်းများ၊ သစ်ကပ်ပန်းများနှင့်တူသော သူငယ်ချင်းများလို့ဆိုနိုင်မယ်ထင်တယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးရင် ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ရတဲ့ ဘ၀ကို ရုပ်ရှင်လို တစ်ခေါက်လောက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ပိုရသမြောက်တယ်။
Monk က ရာနှုန်းပြည့်ပေးဆပ်သူဖြစ်တယ်။ သူက သူ့သူငယ်ချင်းအတွက်ပဲအားလုံးစဉ်းစားနေတယ်။ အချစ်ခံချင်တာ သိပ်ကို အန္တရာယ်များတယ်။ One down နေရာက ချစ်နေ၊ ခင်နေကြရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်းလည်း စဉ်းစားမိတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လေးစား အသိအမှတ်ပြုမှုမရှိရင် သူငယ်ချင်းကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ အချစ်ခံချင်တဲ့သူတွေကို ပြန်မချစ်တာ တော်တော်လေးတွေ့ဖူးတယ်။ ကမ္ဘာကြီးဟာ အောက်ကျို့ပြီးလာတဲ့သူတွေကို အထင်သေးတဲ့ ဒေသကြီးလည်းဖြစ်တယ်။
Monk ဟာ ဟန်ဆောင်မှုတွေမှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်။ သူထင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းအကောင်းစားရဲ့ ဟန်ဆောင်ဖော်ရွေမှုတွေကို အစစ်အမှန်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာစဉ်းစားမိတာက အတုတွေက အစစ်တွေထက်တောင် စစ်သလိုနေတတ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ သူငယ်ချင်းအတုတွေဟာ လိုတာရှိရင် ပိုခင်တတ်တယ်။ အကူအညီလိုရင် ဖုံးတဂွမ်ဂွမ်ဆက်တယ်။ မလိုတော့ရင် မဆက်တော့ဘူး။ ဆက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘာမှမစဉ်းစားနေနဲ့၊ အကူအညီတောင်းစရာရှိလို့လို့ပဲမှတ်။ အဲဒါမျိုးတွေကို ခဏခဏကြုံရရင် လူက စိတ်ကောင်းနည်းလာပြီး ချဉ်သထက် ချဉ်လာတတ်တယ်။
Monk ဟာ သူငယ်ချင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာ သူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလို့ခံယူတယ်။ အဲဒီမှာစဉ်းစားမိတာ Eeyore လေးနဲ့တူတယ်ဆိုတာပါပဲ။ (အရင်တုန်းက Eeyore အကြောင်းရေးဖူးတယ်။ ဖတ်ချင်တဲ့သူတွေ ပြန်ရှာဖတ်လို့ရတယ်။) အဲဒီလိုလူတွေက မုန်းတီးသွားတတ်တယ်။ လိုတာထက် ပိုချစ်မိတဲ့သူတွေက မချစ်တဲ့အခါကြတော့လည်း မမြင်ချင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ အစွန်းရောက်ကုန်တယ်ထင်တယ်။
Monk ဟာ သူငယ်ချင်းလူလိမ်ကို အလွန်အကျွံယုံခဲ့တယ်။ အဲဒါကလည်း ထုံးစံပဲ။ လူကောင်းတွေမှာ လူဆိုးတွေနဲ့တွေ့ဖို့ ဇာတာပါတယ်။ သိတတ်တဲ့သူတွေဟာ မသိတတ်တဲ့သူတွေနဲ့ သိဖို့ဇာတာပါတယ်။ ဇာတာထက် ၀ဋ်ကြွေးပါတယ်ပြောရမယ်။ အဲဒါက အမြဲလိုလိုမြင်နေရတဲ့ လူ့သဘာဝနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေပဲ။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ရှိရင်ကို လူ့ဘ၀ဟာ ဒုလ္လဘ အစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ ခက်တာက သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ သံတူကြောင်းကွဲတွေ၊ နက်တူလုံးကွဲတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် စိတ်နဲ့ဘာသာပြန်ကြည့်ဖို့ပါပဲ။
သူငယ်ချင်းလို့ပဲ ဆက်၍ ခေါ်မည်ခိုင်ကိုလည်း review ရေးထားတာ သတိရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအကြောင်းအက်ဆေးတစ်ပုဒ်မနှစ်ကရေးထားတာလည်း ပြန်တင်ဖို့သတိရပါတယ်။ စာကတော့ တစ်နေ့နည်းနည်းနဲ့နေ့တိုင်းရေးဖြစ်ပါတယ်။ ရေးလက်စတွေထဲမှာတော့ ရန်ကုန်ဘဆွေစာအုပ်ထဲက အမြည်းတစ်ချို့နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး overview တွေရှိပါတယ်။
အခွေတွေငှားထားပြီး renew မလုပ်မိတာနဲ့ ၁၄ ကျပ်ထွက်သွားပါတယ်။ စာအုပ်လို တစ်ရက်ကို ၁၅ ပြားမဟုတ်ဘဲ တစ်ရက်ကို ပြား ၅၀ တောင်ပေးရတယ်။ တစ်ပတ်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် DVD လေးချပ်စာ၃.၅၀ x ၄ =၁၄ ကျပ်ဖြစ်သွားတယ်။
မနေ့ညက ၀ါဆိုသင်္ကန်းသွားကပ်ရင်း စင်္ကာပူမှာ ပိုနေတဲ့သင်္ကန်းတွေကို မြန်မာပြည်ကို ပြန်ပို့ပြီးလှူပေးတယ်လို့သိရတယ်။ အဲဒါကိုလည်းဝမ်းသာတယ်။ ၀ါဆိုသင်္ကန်းလှူတာဟာ သောတပန် ဗီဇာကို တုံးအတုနဲ့ဝင်သလို တစ်ဘ၀တော့ အပါယ်မလားဘူးလို့သိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပြန်ရှာဖတ်ကြည့်တော့ ၀ါဆိုသင်္ကန်းလှူလှူ၊ ကထိန်သင်္ကန်းလှူလှူ ကုသိုလ်ရတာတွေကိုဖော်ပြထားပေမယ့် အပါယ်မလားတဲ့အကြောင်းတော့ရှာမတွေ့လိုက်ပါဘူး။ အသားအရည်လှမယ်၊ အတော်ကြီးလေးတဲ့ မဟာလတာ branded တွေဝတ်ဆင်ခွင့်ရမယ်။ ဧဟိ ဘိက္ခု
Eligible ဖြစ်မယ်။ လိုတဲ့အချိန်မှာလှူလို့ လိုတဲ့အချိန်မှာ ရတဲ့ ကုသိုလ်မျိုးရမယ်။ ဆိုတာတော့တွေ့ပါတယ်။
8 (eight)သာခါ ကျောင်းအမကြီးထင်လို့သေချာဖတ်ကြည့်မှ ၀ိသာခါ ကျောင်းအမကြီးမှန်းတွေ့ရတယ်။ ၀ါဆိုသင်္ကန်းအလှူက ၀ိသာခါ patent လုပ်ထားတယ်လို့သိရတယ်။ ၀ိသာခါကျောင်းအမကြီးဟာ ရဟန်းမတွေကို ရေသေနတ်လှူဖို့လည်း တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ xanthos ပြောလို့ ဘာအတွက်လည်းတောင်ပြန်မေးယူရတယ်။ (တကယ်တော့ ရေသနုပ် လှူဖို့တောင်းဆိုတာပါ။) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မလှူရသေးတဲ့ လူတွေလှူဖို့ နှိုးဆော်ပါတယ်။
>>>>>>>>Monday to Friday>>>>>>Miles to go b4 I sleep, Mile to go b4 I sleep ........